Madaxweyne Hore Oo Mareykan Ah Oo Afrika Ku Tilmaamay “Daanyeero” – Ilays News
Madaxweyne Hore Oo Mareykan Ah Oo Afrika Ku Tilmaamay “Daanyeero”
Madaxweynihii hore ee Mareykanka Ronald Reagan ayaa dalal Afrikaan ah oo ka qeybgalayay kalfadhigii Qaramada Midoobey ee sannadkii 1971-kii ku tilmaamay ‘Inay yihiin Daanyeero’, sida ay ku warrameyso warbaahinta The Atlantic oo soo xiganeyso codad laga duubay.
axaa uu hadalkan sheegay xilli uu telefoon kula hadlayay madaxweynihii Mareykanka xilliggaas, Richard Nixon.
Ronald Reagan ayaa waxaa uu ka careysnaa wafddigii Afrikaanka ahaa ee ku sugnaa kalfadhigii Qaramada Midoobey kuwaas oo kasoo horjeestay cod uu Mareykanka garwadeen ka ahaa oo lagu aqoonsanayay Shiinaha si meesha looga saaro Taiwan.
Markii codeynta lasoo gabagabeeyay, xubinihii ka socday Tanzania waxay bilaabeen inay dabaaldegyo ka dhigaan gudaha kalfadhiggii Qaramada Midoobey.
Xilliggaas, Reagon markii uu soo wacay madaxweyne Nixon maalinkii xigtay, waxaa uu weydiyay inuu codeynta si toos ah uga daawanayay telefishinka iyo in kale.
Waxaa uu ku yiri Reagon, “ In la arko kuwaas, kuwaa Daanyeerada ah ee kasoo jeedo dalalkaas Afrika , dhaleeceeya, illaa iyo hadda Kabo ma xiran karaan”
Codkan waxaa shaaca ka qaaday Tim Naftali oo ah profesoor maaddada taarikhda ka dhiga jaamacadda New York kaas oo agaasime ka ahaa maktabadda madaxweyne Nixon, waxaana lagu keydiyay halkaas dhammaan codadkii laga duubay Nixon intii u dhexeeysay sannadihii 2007-dii iyo 2011-kii.